Mavara echiFrench uye madudzirwo awo - UniProyecta
Kana iwe uchida kudzidza mavara echiFrench, imhaka yekuti mudzidzisi wako kana kosi yechiFrench inogara ichisarudza kuidzidzisa pakutanga. Asi yei? Kune zvikonzero zvakawanda zvakanaka zvekudzidza mavara echiFrench, sezvauchaona mune ino chinyorwa. Asi pane zvakare zvikonzero zvakanaka zvakawanda zvekusazvidzidza, kana kuti kwete kuti zviite chinhu chekutanga iwe kuyedza kugona mumutauro waNapoleon.
Mavara anowanzoonekwa sehwaro hwemutauro, uye makosi mazhinji emitauro yekudzidzira anotangisa vadzidzi nenzira iyi. Kudzidza arufabheti kunogona kubatsira, asi hazvizokubatsire kutaura kana kuwedzera izwi rako remazwi.
Izvi hazvireve kuti iwe unofanirwa kuzvifuratira, zvinongoreva kuti iwe unofanirwa kuzvipa kukosha kwazvinofanirwa zvechokwadi. Ndokusaka pano isu tichitenda kuti mavara mavara anofanira kutanga kudzidza kana iwe uine ruzivo rwekutanga rwemazwi ezuva nezuva, conjugations, nezvimwe.
1 Nzira yekunyora mavara echiFrench
2 Nzira yekureva sei mavara echiFrench
3 Hunhu hwearufabheti muFrench
4 Ungadzidza sei mavara echiFrench
4.1 Dzidza rwiyo rwearufabheti
4.2 Gadzira kuraira
Nzira yekunyora mavara echiFrench
Usati watanga, izvi ndizvo zvaunofanira kuziva nezve alfabheti yechiFrench: kana iwe uri mutauri wekuzvarwa wechiSpanish, hauzove nedambudziko, saka French neSpanish vanogovana mavara akafanana uye kunyangwe mutauro wechiSpanish unosanganisira ñ iyo vavakidzani vedu vasina. Chinhu chega chinoshanduka mutsauko wetsamba idzodzo nemadudziro adzo.
Chekutanga pane zvese, semitauro mizhinji yekuMadokero, tsamba yega yeFrench inogona kuve yepamusoro kana yakaderera.
Ehezve, mazhinji mavara echiFrench anewo akasiyana - maakisi kana zvimwe zviratidzo zvinowedzerwa izvo (kazhinji) zvinokanganisa kududza kwavo. Izvi hazvisanganisirwe mumavara echiFrench, asi zvakakosha kuti vazivikanwe, saka tavasanganisa mune iyo rondedzero yaunozoona pazasi.
Pane chinhu chimwe chete chekuchengeta mundangariro: isu takasanganisira mavara epasi akakwenenzverwa, nekuti ndiwo mashandisiro aanowanzo shandiswa. Zvepamutemo, ndezvechokwadi kushandisa chirevo pane tsamba mune ese madiki ezasi uye mabhii makuru; zvisinei, muFrench yemazuva ese, vanhu vazhinji vanosiya madudziro etsamba huru. Usati waona kuti mavara akasiyana ealfabheti anodudzwa sei muchiFrench, mufananidzo wacho nemuenzaniso wetsamba imwe neimwe uye kududzwa kwaro:
Uye ikozvino, pasina imwezve ado ...
Nzira yekureva sei mavara echiFrench
Iye zvino tava kuzoona kuti mabhii ega ega anoumba mavara echiFrench anodudzwa zvakadzama, pamwe nemisiyano yakasiyana yainogona kuve nayo.
ku - Inogona kuwanikwa mumazwi senge pano, kwazvinoratidza izvozvo kurira kwetsamba kunosimbiswa.
â - Inowanikwa pakati pemazwi mazhinji echiFrench, kusanganisira castle. Kunyangwe kurira kweshoko kusingawanzo shanduke zvakanyanya, iyi tsamba uye matauriro akabatanidzwa chiratidzo chekare.
Semutauro wechiRungu, kurira kweiyo c zvinogona kusiyana zvichienderana netsamba inotevera. Kana ichiteverwa ne e, ikana y, inowanzo rira kunge yakapfava s, seshoko mudiwa. Kana ikateverwa ne h, senge mune izwi kutaura, ichaita kurira kwakafanana ne sh.
ç - Iyo inozivikanwa cedilla inzira iyo iyo iyo c tora ruzha runyoro zvisinei nechero tsamba inoitevera - seshoko français.
e - Inogona kuratidza kududza kwakati, kana chikamu chakapfuura kana chinongedzo chechimiro chechiito. Semuyenzaniso, été.
e - Inoratidza kududzwa chaiko, seshoko nditende.
ë - Zvinoreva kuti tsamba iyi inofanirwa kudomwa kunze kweavo vakaikomberedza, sekushoko kisimusi.
Izwi rakaitwa na g zvinogona kusiyana zvichienderana netsamba inotevera. Kana ichiteverwa ne e, i o y, inowanzo rira senge nyoro g, seshoko orenji, kusiyana ne g yakasimba, seshoko mukomana.
Kana zvasvika pakududza, h angave ari tsamba yakanyanya kuoma yearufabheti muFrench. Kune mhando mbiri dze "h" muchiFrench: h inoshuvira and the h mbeveve.
Semutemo wakazara wechigunwe, kana izwi rinotanga na h rine mavambo echiLatin, h anonyarara.Semuenzaniso, horloges ivo inonzi "lezorloges."
Semutemo wakazara wechigunwe, kana izwi rinotanga na h rinobva kune mumwe mutauro asiri chiLatin, h inosungirwa. Muenzaniso: iye homard.
Ehe, hazvisi nyore kuziva mabviro ezwi rimwe nerimwe, uyezve kune zvimwe zvinosiiwa. Mhinduro chete yandawana ndeyangu kungoshandisa uye kuyeuka mazwi na h, uye kunyangwe izvozvi ini nguva nenguva ndinokanganisa kana kusahadzika, sevanhu vekuFrance vanhu pachavo nguva nenguva, saka hapana chikonzero chekushushikana, nekuti mavara echiFrench akaomesesa munhu wese 🙂
ï - Inofanirwa kutaurwa zvakasiyana kubva kune mavara anoikomberedza.
î - Hazvina kunyanyo shandiswa nhasi kunze kwekunge zviine zvimwe zviito, senge kuberekwa.
ô - Inogona kuratidza shanduko mukutaura.
Sezvo muChirungu, izvo zvinogara zvichiteverwa newe.
MuchiFrench, iyo kazhinji ine ruzha runyoro (hanzvadzi sikana ...), kunze kwekunge iri pakati peshoko rinoteverwa nevhawero - zvino rinodanwa sa z, se mu kuzadzika. Izwi z rinoshandiswawo kune hukama pakati pe s neshoko rinotanga nevhavha (kana dzimwe nguva tsamba yakanyarara) - semuenzaniso, les étoiles.
ù - Inongoshandiswa kusiyanisa mazwi ou y apo.
- Zvinoreva kuti tsamba iyi inofanira kutaurwa zvakasiyana kubva kune vanoikomberedza.
Senge muChirungu, iyo y inobatwa sevhawero pamatanho ekududzira.
Ÿ - Kazhinji, tsamba iyi inoshandiswa ine zita reguta rekare reFrance kana guta.
Hunhu hwearufabheti muFrench
Mwoyo (moyo) nderimwe remazwi akati wandei echiFrench akanyorwa nemavara asipo muchiSpanish. Kunge mimwe mitauro yakawanda, chiFrench chinowanzo bvumidza mazwi ekune dzimwe nyika kuti anyorwe mumanyoro avo ekutanga, zvinoreva kuti mataurirwo kana mavara asiri mumavara echiFrench anosanganisirwa zvakadaro.
Uye zvakare, kune zvakare maviri ligature o pokurara iyo iwe yaunogona kuwana mumazwi echiFrench. Aya typographically uye phonetically akabatanidzwa mavara maviri anoratidza kumwe kududza. Pano tinokurudzira vhidhiyo kuti ive nani kudzidza mavara echiFrench:
Iwo maviri akajairika French ligature ndeaya:
æ, musanganiswa wemavara a uye e. Inoshandiswa mune mamwe mazwi akatorwa zvakananga kubva muchiLatin, senge Chidimbu chehumbowo chemamiriro efundo ne kodzero.
œ, musanganiswa wemavara o uye e. Iwe pamwe wakambovaona mumashoko akafanana se hanzvadzi nemoyo.
Neraki, kana kiibhodhi yako isingatenderi zviratidzo izvi kuti zvipinde, maFrench anonzwisisa izwi kana ukangonyora mavara maviri ega. Ehezve, kana iwe uchinyora zviri pamutemo, zvepamutemo kana zvedzidzo gwaro, ligature rinofanira kushandiswa. Izvo zvakanaka mune izvi zviitiko ndezve kungoteedzera nekuteedzera tsamba.
V kuti mavara anonyanya kushandiswa muFrench ndi e, a, i, s uye n. Tsamba dzinonyanya kushandiswa ndidzo x, j, k, w, uye z. Ruzivo urwu runogona kunge rwusingaratidzike serunobatsira, asi rwunobatsira kuziva kwekutungamira kudzidza kwako.
Ungadzidza sei mavara echiFrench
Kana iwe pakupedzisira wafunga kutarisana nemavara echiFrench, takagadzirira akateedzana matipi ekuti zvive nyore kwauri kuti udzidze. Heano mamwe mazano:
Dzidza rwiyo rwearufabheti
Unogona kunge uchiziva rwiyo urwu mururimi rwaamai, kana mune mimwe mitauro yawakadzidza. Zvakanaka, iripowo muchiFrench mimhanzi yakafanana inobata. Unogona kuwana akasiyana mavhezheni echiFrench alphabet rwiyo nekutsvaga internet. Iyo izano rakanaka kwazvo, kunyanya kune vana kuti vadzidze mavara echiFrench.
Ichi ndicho chandinofarira, uye chandakashandiswa nevadzidzi vangu kudzidza mavara echiFrench. Chinhu chega chakasarudzika ndechekuti chinoimbwa kumagumo haisiyo yechinyakare ndima, asi chimwe chinhu chinoenderana nemazita evatambi vane hupenyu.
Zvakadaro, inoimbwa mushe uye inodudzwa nemazvo, zvakasiyana nedzimwe shanduro, dzinomhanya zvakanyanya kana kushandisa muimbi asiri wemo. Iwe unogona kutarisa zvakataurwa pazasi pevhidhiyo kuti uone kana paine chero matambudziko emataurirwo. Kana uchinge wawana vhezheni yaunoda, edza kuiimba kakawanda pazuva.
Madimikira anozivikanwa muzvikoro zveFrance nechikonzero uye ndizvozvo kuti vanouya vanobatsira pakudzidza nekuisa mumusoro kunyora kwemazwi akajairika.
Uye izvi zvave zvirizvo, tinovimba iwe wakafarira kosi yedu kuti udzidze kuti mavara ealfabheti anodudzwa sei uye akanyorwa muchiFrench. Kana iwe uine chero mibvunzo, iwe unogona kutisiira isu mhinduro uye isu tichaedza kupindura nekukurumidza sezvazvinogona.
kudzidziswa » Mitauro » French » Mavara echiFrench uye mataurirwo awo